Dowladda Soomaaliya oo Saraakiil sar sare u xirtay Weerarkii Hotel SYL ee dhacay bishii Janaayo | Sagal Radio Services
Sida ay sheegayaan wararka ilaa 12 Saraakiil sar sare ah ayaa loo xiray weerarka, kuwaasoo qaarkood lagu eedeeyay inay la shaqeynayaan Kooxda Al-Shabaab.
Saraakiisha la xiray ayaa waxay darajadooda u dhaxeysaa Jeneraalo ilaa Colnelo, waxaana la sheegay in Guddiga dowladda u saartay baaritaanka weerarkaas ay dhowaan warbixin soo gudbin doonaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in saraakiishan oo sagaal ka mid ah xiran, halka saddex kalena ay dalka ka maqan yihiin ayaa waxaa ku socda baaritaan ku aadan inay wax ka ogaayeen weerarkii Hotelka SYL.
Qof watay baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay kana yimid dalka dibadiisa ayaa isku qarxiyay albaabka hore ee Hotelka, xilli Hotelka ku shirayeen wafdi Turki ka socday ka hor booqashadii uu ku tagay halkaasi Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Weerarkii Hotel SYL ayaa dhacat 22-kii bishii Janaayo, maalin ka hor xilliga la filayay inuu Muqdisho yimaado Madaxweynaha Turkiga,
Weerarkan oo dhacay 22-kii bishii Janaayo, maalin ka hor xilligii la filayay inuu Muqdisho yimaado Madaxweynaha Turkiga Erdogan, ayaa hadana waxaa uu dib uga dhacay geeridii Boqorkii Sacuudiga, iyadoo kadib uu Muqdisho booqasho ku yimid 25-kii Janaayo.
Weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay ilaa saddex ruux, halka Al-Shabaab ay sheegatay mas’uuliyada weerarkan, iyadoo durbaba weerarkan uu keenay su’aalo badan oo la iska weydiiyay sida uu ku dhacay, xilli wadooyinka ay labo maalmood ka hor sii xirnaayeen.
Waa markii u horeysay ee Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda loo xiro qaraxyo ka dhaca magaalada Muqdisho, iyadoo horay Al-Shabaab u geysatay weeraro dhowr ah oo ay ku qaaday xarumaha dowladda, kaasoo xataa aan raadkooda la helin cida soo abaabushay ama wax ka ogeyd.